नेपालमै यस्तो ठाउँ जहाँ पैसठ्ठी किमी यात्रा गरेको भाडा दुई हजार पाँच सय लाग्छ ! « Etajakhabar
नेपालमै यस्तो ठाउँ जहाँ पैसठ्ठी किमी यात्रा गरेको भाडा दुई हजार पाँच सय लाग्छ !
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७६, बुधबार ०९:४०
गङ्गराज पण्डित – जिप व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्न अझै रोकेका छैनन् । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने जिल्लाको पिलुचौरदेखि कालिकोटको जितेगडासम्मको ६५ किलोमिटर बाटोमा रु दुई हजार ५०० सम्म भाडा लिने गरेका छन् । महङ्गो भाडा जिपमै तिर्नु यात्रुका लागि बाध्यता जस्तै छ । जिप प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले भनेअनुसार भाडा तिर्नुपरेको यात्रुको दुखेसो छ ।